Labo Kun Soomaali Ah Oo Muddo Todobaad Ah Laga Tarxiilay Dalka Sacuudiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Muddo hal todobaad ah ayaa dalka Sacuudiga laga tarxiilay ilaa labo kun oo Soomaali ah, kuwaasoo bilihii lasoo dhaafay kiu jiray xabsiyada dalkaas.
Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay Soomaali badan oo laga soo tarxiilay waddanka Sacuudiga tan iyo bishii December ee sanadkii la soo dhaafay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka kana tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada Soomaalida laga soo tarxiilayo waddanka Sacuudiga.
Xildhibaan Dalxa ayaa sheegay in bishii December ee sanadkii 2013 Muqdisho la geeyay 8,500 oo qof oo Soomaali laga soo tarxiilay Sacuudiga, isaga oo xusay in labadii maalmood ee la soo dhaafayna Muqdisho ay gaareen in ka badan 2 kun oo Soomaali laga soo masaafuriyay dalka Sacuudiga.
Wuxuu intaas ku daray in aanay jirin tallaabo qaran oo ay qaadday dowladda Soomaaliya, si wax looga qabto Soomaalida ku nool dalka Sacuudiga ee sida masaafuriska ah loogu soo celinayo waddanka.
Dadka Soomaalida ah ayaa tacadiyo kala kulma ciidamada qaabilsan tarxiilka ee dalka Sacuudiga, waxaana lasoo tarxiilaa, iyagoo aan waxba heyn loomana ogolaado in haddii wax lacago ah u yaalleen meeshii laga qabtay ay soo qaataan ama laga dabakeen.
STOP Somalia’s Last Tribal Warlord Mr. Siilaanyo